Dawladda Soomaliya oo caydhisay madaxii Hay’adda FAO
Nuxurka dacwad ka dhan ah Masuulkaas oo loo gudbiyey Wakiilka Qarmada Midoobay…
Muqdisho(GNA)-Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday Qaramada Midoobay in waddanka Soomaaliya laga saaro wakiilka Hay’adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO Richard Trichard oo ay ku eeddeysay inuu ku kacay dhaqan ka baxsan xirfadda oo meel uga dhacaysa hay’badda iyo sharafta wakiilnimo ee Soomaaliya.
Warqad ka soo baxday wasaarrada arimaha dibada Soomaaliya oo ku soctay wakiilka QM Soomaaliya iyo hay’adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan UN-ka ee FOA ayaa lagu soo gudbiyay go’aanka dowladda Soomaaliya kaga dacwootay Richard Trichard.
‘’Wakiilka waxaa uu la yimid hab dhaqan iyo aqlaaq aad u liidata taa oo wax u dhintay xiriirka hay’adda FOA iyo dowladda Soomaaliya” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arimaha dibada Soomaaliya.
Eedeymaha dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah Trichard waxa sidoo kale qeyb ka ah in uu muujiyay ixtiraam darro iyo hab dhaqan xad gudub ku ah saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro.
Dowladda Soomaaliya oo warqada soo saartay 13-kii bishan June ayaa ku ekeyd maanta ilaa haddana ma cadda in Mr Richard Trichard dalka joogo iyo in kale.
CAYDHISAY ERIDA FAO Somalia un	2017-06-16
Previous: Madaxweyne Siilaanyo oo safar gaar ah ku tegay Imaaraadka
Next: Ururrka Qareennada Somaliland oo Jawaab ka bixiyey hadal ka soo yeedhay Garyaqaanka Guud ee Dawladda